दूध उद्योग ः बियर र कोकाकोलाको मारमा | चितवन पोष्ट दैनिक
दूध उद्योग ः बियर र कोकाकोलाको मारमा
चितवन र यसआसपासमा तीनवटा उद्योग छन् । दुईवटा हर्लक्कै बढेका छन्, एउटा फस्टाउनै नसकेर बेहाल छ । गोन्द्राङको कोकाकोला फ्याक्ट्री झन्झन् मौलाउँदै गएको छ । त्यसपछि आँखाले झट्ट नदेखिने अर्को फ्याक्ट्री छ, त्यो पनि हृष्टपुृष्ट नै देखिन्छ तथ्य–तथ्याङ्कबाट । त्यो कारखाना हो, टुबोर्ग बियर उत्पादन गर्ने गोरखा ब्रुअरी । जुन फ्याक्ट्री नवलपरासी मुकुन्दपुरमा छ । अहिले गैँडाकोट नगरपालिकामा पर्ने सो फ्याक्ट्री नारायणी किनारमा छ, जसको ठीक पारि भरतपुर उपमहानगरपालिकाको मंगलपुर पर्छ । यी दुई भए फस्टाएका उद्योगहरु, सुकेनास लागेको भनेर चर्चा गर्न खोजेको अर्को उद्योग भरतपुरमै रहेको छ । त्यसमा पनि झट्ट धेरैको आँखा पुगेको छैन । त्रिशूलीकिनारको ठिमुरामा रहेको चितवन मिल्क सञ्चालनमा आएको पाँच–छ वर्ष हुन लाग्यो । दौडनु पर्ने बेलामा यो उद्योग बामे सर्न पनि सकेको छैन रे, चर्चा यही सुनिन्छ । अवस्थाले पनि यो चर्चालाई पुष्टि गर्छ ।
ठिमुराको उद्योगले बच्चादेखि तरूण र प्रौढसम्मलाई अत्यावश्यक ठानिएको जीवनदायी दूध र त्यसका अनेक परिकार उत्पादन गर्छ । त्यसपछि चर्चा भएका अन्य दुई उद्योग छन्, जसको उत्पादन हाम्रो जीवनमा नभए पनि केही फरक पर्दैन । तर, कोकाकोला उत्पादन गर्न र वितरण गर्न अहिले भ्याइनभ्याइ छ । अमेरिकन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको यो उत्पादनले गाउँगोठ सबै छर्लप्पै ढाक्यो । गोन्द्राङमा उद्योगको तला र स्वरुप सधैँ बढेको बढ्यै गर्र्छ । हाम्रै आँखाले देख्दा पनि त्यो भव्यता लोभलाग्दो छ । हिसाबकिताब गर्दा हुने नाफाको खाता पक्कै पनि दह्रो छ भनेर ठोकुवा गर्न त्यो उद्योगको चहलपहल हेर्दा नै काफी छ । अब रह्यो, बियर उद्योगको कुरा । देख्दा पनि यो उद्योग शानदार लाग्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा यो उद्योगले यति धेरै राजस्व बुझाउँछ कि त्यहाँ आउने सात–आठ अरबमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यो उद्योगले बुझाउने अन्तःशुल्कले मात्रै ओगटेको हुन्छ । उद्योग फस्टाउनु नराम्रो होइन । यसले रोजगार सिर्जना गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायामान बनाउन मद्दत गरेको छ ।
तर चिन्ता के हो भने, मान्छेको जीवनमा नभए पनि केही फरक नपर्ने बियर र कोक उद्योग यसरी फस्टाउँदा जीवनदायी दूध उत्पादन गर्ने कारखाना किन सुकेनास लाग्यो भन्ने हो । दूध उद्योगले क्षमताअनुसारको उत्पादन दिन सकेको छैन । उद्योगलाई दूध बेच्ने किसानलाई पैसा तिर्न नसक्ने समस्या पनि बेहोे¥यो यसले । उद्योग र व्यापार व्यवसाय चलाउनेको व्यवस्थापकीय कौशलताले पनि फस्टाउनु नफस्टाउनुमा भूमिका खेल्छ । तर, दूध उद्योग फस्टाउनुमा व्यवस्थापकको अक्षमतामात्रै जिम्मेवार हो त ? त्यसो भए, सक्षम उद्योगपतिहरु यस्तो जीवनदायी वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखाना खोल्न किन आउँदैनन् त ? यो प्रश्न झनै अहम् छ । यसरी हेर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्रैले दूध उद्योग बेहाल हुने अवस्थामा पुगेन कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
कृषिप्रधान देश हो, नेपाल । हरेक घरमा एउटा न एउटा गाई वा भैँसी हुने अवस्था थियो, केही वर्षअघिसम्म । घरको दूध, घरको मही र घरकै दही–घिउ खाएर हुर्केको अनुभव हामीसँग छ । तर, ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भन्ने नाराले अहिले यसरी दिग्भ्रमित बनायो कि ठेकीको मही खानु पछौटेपनको निसानी हो भन्ने बनायो, हामीलाई । केही वर्षअघिको दशैँमा बियर कम्पनीले एउटा विज्ञापन निकाल्यो, जसमा बियर खानु भनेको दूध खानुभन्दा बढी फाइदाजनक हो भन्ने प्रस्ट सन्देश उल्लेख थियो । नचाहिने वस्तुले यसरी सशक्त र आक्रामक विज्ञापन नीति लिएर अगाडि बढेपछि सर्वसाधारण दिग्भ्रमित हुनु अस्वाभाविक होइन ।
कोका होस् वा बियर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीकै बोलबाला छ नेपालमा । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको यसरी बोलबाला बढेर जाँदा स्वदेशी पुँजीमा सुरू हुन लागेका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारी नीति पनि भएन नेपालमा । दूध उद्योग नफस्टाउनुको एउटा कारणमा सरकारी अव्यवस्था पनि जिम्मेवार देखिएको छ । दूध उद्योगले किसानलाई मनग्ये लाभ दिने भनेको पाउडर दूध उत्पादन गरेर हो । बढी उत्पादन भएका बेलामा पर्याप्त दूध किनेर पाउडर बनाउने र कम दूध उत्पादन भएका बेलामा बजारमा बेच्दा उद्योग र किसान दुवै फस्टाउन सक्ने अवस्था छ । तर, नेपाली दूध कारखानाको समस्या के हो भने त्यसरी उत्पादन गरेको पाउडर दूध गोदाममै थन्काउनु पर्ने भयो ।
उत्पादन लागत बढी भएका कारण नेपाली पाउडर दूध महँगो भएको छ । बजारमा महँगो होइन, सस्तो उत्पादन बिक्छ । अनि, विदेशबाट वैधानिक रुपमा मात्रै होइन, अवैधानिक रुपमा अति कम गुणस्तरको पाउडर दूध पनि आइरहेको छ । यो अवस्थालाई रोक्न सरकार कडाइका साथ उत्रनुपर्छ । तर, यसरी सोच्ने र काम गर्ने सरकार नै भएन नेपालमा । फलतः उद्योगपतिको व्यवस्थापकीय अक्षमतालाई दोष दिएर उम्कन सजिलो भएको छ ।
दूध उद्योग नेपालीको आयस्रोत बढाउने मुख्य माध्यम हो । यसले परनिर्भरता कम गराउन मद्दत
गर्छ । तर यो देशको विडम्बना ! हामी रक्सी, चुरोट, चाउचाउमा आत्मनिर्भर बनेका छौँ । यस्ता वस्तुहरु अवैध रुपबाट पनि भित्रिन सक्दैनन् । तर, जीवनदायी उत्पादनहरुलाई न हामी प्रवद्र्धन गर्न सकेका छौँ, न अवैधानिक आयातलाई रोक्न नै । आजको विडम्बना नै यही हो । औद्योगिकीकरणमा प्रवेश गरेको भनेको कुखुरापालन व्यवसायमा समेत अवैध चल्ला आयातको घातक प्रकोप बर्डफ्लुजस्तो महामारीको भन्दा पनि खतरनाक बन्दै आएको छ । माछाको समस्या त्यही छ । केरा, तरकारीको अवस्था पनि पृथक् छैन । यसैले, भन्न के सकिन्छ भने कृषि व्यवसाय उचित नीतिको अभावमा फस्टाउन सकेको छैंन । यसलाई फस्टाउन सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
कोकाकोला उद्योग, बियर र चाउचाउ उद्योग फस्टाऊन् र बढून्, त्यसमा केही गुनासो होइन । तर, नेपालीको जीवनस्तर सुधार्ने, स्वास्थ्यमा टेवा दिने, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्योग, कलकारखानाको व्यापकता सरकारी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, नभएको चाहिँ यही हो । दूध उद्योग फस्टाउँदा, मासु उद्योग विस्तार हुँदा यसले नेपाली अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवेशलाई निकै सकारात्मक मोडमा लैजान्छ । धेरैले जानेबुझेको यही हो, तर राजस्व र रोजगारीमा देन दिँदादिँदै पनि केही उद्योगहरु यस्ता छन्, जसले मानव स्वास्थ्य र सामाजिक वातावरणलाई साह्रै जीर्ण बनाएका छन् । देशमा यस्ता उद्योगहरु चाहिँ फस्टाउन थाले । जनसाधारण यो विषयमा चिन्तित बन्न आवश्यक छ । सरकारले ध्यान पु¥याउन अबेला गर्नु भएन । स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ उत्पादन र यसमार्फत अर्थतन्त्र र राजस्वमा सकारात्मक बढोत्तरी सरकारको प्राथमिकता बनोस् । राजस्वको निरपेक्ष चक्करमा लागेर खुलेका उद्योगहरुले पारिवारिक हिंसा र मानव स्वास्थ्यमा क्यान्सरजस्तो घातक परिणाम ल्याउने उद्योगहरु मात्रै फस्टाउन भएन ।